Al-Shabaab oo sheegatay qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho.
You are at:Home»Somali News»Al-Shabaab oo sheegatay qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho.
By admin on	 March 28, 2019 Somali News
Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha laga soo buuxiyey oo maanta ka dhacay wadada Maka Al-Mukarama gaar ahaan maqaayad ka soo horjeeda hotelka Weheliye.
Al-Shabaab ayaa sheegtay in qaraxan lagu beegsaday goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo howlwadeenno ka tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya.
“Mujaahidiinta ayaa qarax ku beegsaday goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo Howlwadeenno ka tirsan cadowga ugu yaraan 10 ka tirsan cadowgii bartilmaameedku ahaa ayaana goobta ku dhintay” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Al Shabaab waxay sheegtay in goobta weerarku ka dhacay ay ku sugnaayeen agaasimayaal Wasaaradeed, Xildhibaanno hore, saraakiil ka tirsan sirdoonka iyo shaqaalaha Wasaadaradaha dowladda kuwaas oo dhammaantood bartilmaameed ahaa.
Warar madax banaan ayaa sheegaya in dadka ku dhintay qaraxii maanta oo gaaraya 11 qof ay badankood ahaayeen shacab, marka laga reebo xildhibaan ka mid ahaa baarlamankii hore, waxaana ku dhaawacmay 16 kale oo uu ku jiray Shiikh Yuusuf Cali Ceynte oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed.